Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Nepal » Ihe ịtụnanya maka ụbọchị ndị njem nlegharị anya na Nepal na -amalitegharị ọzọ?
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Nepal • News • ndị mmadụ • trending Ugbu a • WTN
Njem njem nlegharị anya nke Nepal
Namaste World Tourism Day 2021! Maka Nepal nke a nwere ike ịpụta na ụlọ oriri na nkwari akụ ga -anabata ndị ọbịa si mba ọzọ n'oge na -adịghị anya. Nepal ga -enwe ike igosi ndị ọbịa na -achọ nnwere onwe nke ịgbasa ohere, ọdọ mmiri, ugwu na nri ya sara mbara, iji nwee ọmarịcha ebe ụwa a nwere ike inye.
Ndị ndu njem nlegharị anya nke ọma na Nepal na -atụ anya ịmalitegharị mba Himalaya maka njem.
Ụbọchị njem nlegharị anya ụwa na Nepal agaghị abụ naanị mebere ememme, kama ọ ga -abụ mmemme anụ ahụ na mba a na -atụ anya na ọ ga -akụ mgbịrịgba nke imeghe ndị ọbịa.
Site na mkpọchi ọnwa, Nepal adịla njikere ịnabata ndị ọbịa.
Enwere ike inwe ihe kpatara gọọmentị Nepal ji kpebie ime ememme ụbọchị nlegharị anya ụwa na -abịanụ na Nepal n'ụzọ anụ ahụ.
Ọ bụrụ na enwere mba ọ bụla n'ụwa ebe ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya abụghị nsogbu, ọ ga -abụ Nepal. Gọọmentị Nepal emechiela mba ahụ ruo ọtụtụ ọnwa iji zere mgbasa nke Coronavirus. Na mbido oria ojoo a hụrụ Nepal dị ka ihe atụ nye ụwa maka ichebe ndị njem.
Ndị isi njem nlegharị anya mpaghara akwadebela maka ịmalitegharị ya. N'ime nzukọ izu abụọ gara aga, onye bụbu onye isi oche nke Nepal Tourism Board, Deepak Raj Joshi kpebisiri ike ịrịọ gọọmentị ka ewepu ihe mgbochi iche maka ndị njem ọgwụ mgbochi iji kpalie njem nlegharị anya na Nepal.
N'izo aka na a na -enye ndị ọrụ njem nlegharị anya n'ihu ọgwụ mgbochi ugbu a, ọ bụ ọnọdụ otu a ka gọọmentị Nepal ga -ekwupụta mpaghara njem.
Network Njem Nleta Ụwa Onye isi oche Juergen Steinmetz bụ onye na -ekwu okwu na ihe omume na nso nso a site na ndị isi njem nlegharị anya nke Nepal na -atụlekwa nzọụkwụ ọzọ iji mepee njem na njem nlegharị anya na mpaghara Himalayan na Nepal, Bhutan, India, na Tibet.
Deepak Raj Joshi na -ebute ụzọ Otu mmasị Himalayanp maka netwọ njem nlegharị anya ụwa.
Izu abụọ gara aga, ndị otu ahụ na -agbali maka ịmaliteghachi visa na mbata na nkwalite ule PCR n'ọdụ ụgbọ elu.
Mgbe ngalaba nke Nepal nwere oedere n'okpuru mgbochi ụfọdụ, dị ka ụlọ ihe nkiri sinima na ụlọ oriri na ọ atụ atụ nwere ikike 50%, mana enweela enweghị mmelite mmachi njem Nepal n'ime ọnwa isii.
Ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa 2021, a ga -eme ya na Nepal.
Onye minista ọdịbendị, njem nlegharị anya na ọkwọ ụgbọ elu nke Nepal ekwupụtala na Septemba 27th a ga -eme nnukwu emume na nkpuchi na ndọpụ mmekọrịta.
Isiokwu maka Ụbọchị Njem Nleta Ụwa nke afọ a bụ "Njem nlegharị anya maka uto nke gụnyere. ”
A na -atụ anya na isiokwu a ga -enye aka n'ịkwalite nghọta ka ukwuu na ebumnuche UN Sustainable Development. A na -ahazi usoro ihe omume n'ụlọ ezumezu nke Nepal Tourism Board.
Video site na Scott MacLennan, eTN Nepal
Enwebeghị mmelite gọọmentị ugbu a maka ọnọdụ njem nlegharị anya na Nepal, mana isi mmalite nke ọma eTurboNews na -atụ anya ọkwa a ga -abịa n'oge adịghị anya.
A na -atụ anya na ọbịbịa Nepal nke ndị ọbịa nwere ọgwụ mgbochi zuru oke maka ụmụ amaala si n'ọtụtụ mba. Agaghị achọ kwa iche maka ndị ọbịa dị otu a.
Scott MacLennan, eTurboNews onye nta akụkọ na Nepal kwuru, sị: Nke a bụ nnukwu ụzọ iji mee ememme ncheta ndị njem ụwa.
Enwere ike ịchọta ozi gbasara njem nlegharị anya nke Nepal na www.welcomenepal.com